Maxkamadeynta Messi iyo aabihii oo maanta ka bilaabatay magaalada Barcelona – Gool FM
(Barcelona) 31 Maajo 2016. Waxaa maanta oo talaado ah furmay maxkamadeynta Lionel Messi iyo aabihii Jorge Horacio.
Waxaa lagu soo eedeeyay inay lunsadeen lacago canshuuraad ah oo gaaraya ilaa 4.1-milyan oo euro sanadihii u dhexeeyay 2007 ilaa 2009.
Kabtanka xulka Argentina ayaa nafsadiisa isaga marag kici doona khamiista, afarmaalmood ka hor kulanka furitaanka Copa America uu xulkiisa America kula yeelan doono Chile, iyadoo uu isku dayayo Messi inuu iska rido dambiyada lagu soo eedeeyay.
Qareenka Messi Enrique Bacigalup ayaa xaadir ku ahaa bilowga dacwadaha.
Messi ayaa lagu waday inuu ka fogaado arrimahan maxkamadeynta maadaama uu aabihii masuul ka ahaa canshuuradkiisa iyo ganacsigiisaba laakiin qareenka u xilsaaran arrinka ayaa markii dambe doortay inuu diido waxyaabaha ay u soo jeediyeen dacwad oogayaasha isla markaana amray in maxkadda la soo taago Messi iyo aabihiiba.
Maxkamadeyntan owgeed Messi ayaa seegaya is diyaarinta xulkiisa Argentina ee Copa America kaa oo sabtida soo socota ka bilaaban doona United States. Waxaa la filayaa in Messi uu si toos ah ugu duulo dalka Mareykanka marka ay soo idlaato maxkamadeyntiisa.